Nkonyaayi, Asumansɛm, Ne Abayisɛm Ho Nokwasɛm
Ɔkwan a Ɛkɔ Daa Nkwa Mu No—So Woahu?
KENKAN WƆ Abbey Acholi Afrikaans Amharic Ateso Attié Aukan Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Bissau Guinean Creole Boulou Bété Chichewa Chitonga Cibemba Damara Douala Edo English French Ga Haitian Creole Igbo Indonesian Italian Jula Kiluba Kinyarwanda Kisonge Kwanyama Lhukonzo Lingala Lomwe Luganda Luo Medumba Ngangela Nyungwe Nzema Oromo Portuguese Rutoro Shona Sidama Spanish Swahili Tigrinya Tiv Twi Urhobo Venda Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba
1. Ɔkwan bɛn so na nkonyaayi, asumansɛm, ne abayisɛm atrɛw?
NHOMA bi a wɔfrɛ no African Traditional Religion, kyerɛ sɛ “wɔ Afrika no, ɛho nhia sɛ wubebisa sɛ bayi wɔ hɔ anaasɛ enni hɔ,” na ɔde kaa ho sɛ, “Afrikani biara gye tom paa sɛ bayi wɔ hɔ ankasa.” Wɔn a wonnim nhoma ne wɔn a wonim nhoma nyinaa gye nkonyaayi, asumansɛm, ne abayisɛm di. Nkramofo ne Kristoman akannifo nso gye di.
2. Sɛnea nnipa pii gye di no, ɛhefa na nkonyaayifo tumi no fi?
2 Sɛnea Afrikafo pii gyidi kyerɛ no, ahonhom a wontumi nhu wɔn, honhom mu tumi bi wɔ hɔ. Onyankopɔn wɔ so tumi. Ahonhom ne nananom a wɔawuwu betumi de adi dwuma. Na nnipa binom nso nim ɔkwan a wɔfa so nya na wɔde di dwuma, sɛ́ wɔde bɛyɛ adepa (bayi papa) anaa adebɔne (bayi bɔne).
3. Dɛn ne bayi bɔne, na dɛn na nnipa gye di sɛ ebetumi ayɛ?
3 Wɔde bayi bɔne, anaasɛ asumansɛm di bɔne tia atamfo. Wosusuw sɛ wɔn a wɔde di dwuma no wɔ tumi bi a wɔde soma mpan, nnomaa, nwansena, ne mmoa foforo ma wɔkɔtow hyɛ nkurɔfo so. Dodow ara gye di sɛ bayi bɔne na ɛde ntɔkwaw a esi, awo a wonnya, nyarewa, ne owu mpo ba.
4. Dɛn na nnipa pii gye di fa abayifo ho, na dɛn na ebinom a wɔde wɔn ho ahyɛ abayisɛm mu pɛn no mu bi aka?
4 Nea ɛne no di nsɛ ne abayisɛm. Wɔkyerɛ sɛ abayifo gyaw wɔn nipadua gu hɔ anadwo na wotu, ebia wokohyia abayifo foforo anaasɛ wɔkɔwe nnipa a wɔanya wɔn nam. Esiane sɛ abayifo no nipadua no da so ara da wɔn mpa so nti, wɔn a aduru kyere wɔn ma wogyae abayisɛm di na wɔde asɛm yi ho adanse ma. Sɛ nhwɛso no, Afrika nsɛmma nhoma bi faa nkurɔfo bi a wɔagyae bayi (titiriw mmeawa) nsɛm kae sɛ: “Makunkum nnipa 150 denam kaa akwanhyia a meyɛ ma ɛbae so.” “Makunkum mmofra baanum denam wɔn mogya nyinaa a menomee so.” “Makunkum me mpenafo baasa esiane sɛ wogyaee me nti.”
5. Dɛn ne bayi papa, na wɔyɛ no ɔkwan bɛn so?
5 Wɔkyerɛ sɛ bayi papa bɔ nnipa ho ban fi bɔne ho. Wɔn a wɔwɔ bayi papa no hyɛ nkonyaayi mpɛtea anaa bansere. Wɔnom nnuru a ɛbɛbɔ wɔn ho ban anaa wɔde srasra wɔn ho. Wɔde nneɛma bi a wogye di sɛ tumi bi a ɛbɛbɔ wɔn ho ban wom sie wɔn afie mu anaa fam. Wogye suman nneɛma a Koran anaa Bible mu nsɛm wom di.
Atoro ne Nnaadaa
6. Dɛn na Satan ne n’adaemone no ayɛ wɔ bere bi a atwam no, na ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ yebu wɔn tumi no?
6 Ɛyɛ nokware sɛ Satan ne n’adaemone no yɛ nnipa atamfo a wɔn ho yɛ hu. Wɔwɔ tumi a wotumi de nya nnipa adwene ne wɔn asetra so tumi, na tete no, wotumi hyɛnee nnipa ne mmoa nyinaa mu. (Mateo 12:43-45) Bere a ɛnsɛ sɛ yebu wɔn tumi sɛ esua no, saa ara nso na ɛnsɛ sɛ yebu saa tumi no sɛ ɛyɛ den dodo.
7. Dɛn na Satan pɛ sɛ yegye di, na ɔkwan bɛn so na wɔyɛ eyi ho mfatoho?
7 Satan aben wɔ nnaadaa mu. Ɔdaadaa nkurɔfo ma wosusuw sɛ ɔwɔ tumi kɛse sen sɛnea ɔwɔ ankasa. Sɛ mfatoho no: Wɔ ɔko bi a esii wɔ Afrika man biako so no, asraafo no de akasam afiri hunahunaa wɔn atamfo. Ansa na asraafo no bɛtow ahyɛ wɔn atamfo so no, wɔbɔ aprɛm ne atuo nnyigyei a wɔakyere agu hama so denneennen. Na wɔpɛ sɛ wɔn tamfo no gye di sɛ wɔne asraafo a wɔwɔ akode a ano yɛ den na ahyia. Wɔ saa kwan no ara so no, Satan pɛ sɛ nnipa gye di sɛ ne tumi nni ano. N’atirimpɔw ne sɛ obehunahuna nkurɔfo ma wɔayɛ n’apɛde na ɛnyɛ Yehowa apɛde. Mmoma yensusuw atoro abiɛsa bi a Satan pɛ sɛ nkurɔfo gye di ho nhwɛ.
8. Atoro biako bɛn na Satan hyɛ ho nkuran?
8 Atoro biako a Satan hyɛ ho nkuran ni: Adebɔne biara mma kwa; adebɔne biara a emfi obi pɔtee nam tumi bi a wontumi nhu so na ɛba. Sɛ nhwɛso no, fa no sɛ atiridiinini akum abofra bi. Ebetumi aba sɛ ne maame nim sɛ atiridiinini yɛ yare a ntontom de ba. Nanso ebia obegye adi nso sɛ obi na ɔnam bayi so somaa ntontom no sɛ ɔmmɛka ne ba no.
Ɛtɔ mmere bi a, nneɛma bɔne sisi kɛkɛ
9. Ɔkwan bɛn so na Bible no kyerɛ sɛ ɛnyɛ ɔhaw nyinaa na efi Satan?
9 Ɛwom sɛ Satan wɔ tumi a obetumi de ɔhaw ahorow aba de, nanso ɛyɛ mfomso sɛ yebegye adi sɛ ɔno na ɔde ɔhaw ahorow nyinaa ba. Bible ka sɛ: “Ɛnyɛ ahoɔharefo na wodi nkonim mmirikatu mu, na ɛnyɛ ahoɔdenfo na wodi nkonim ɔko mu, na ɛnyɛ anyansafo na wonya aduan, na ɛnyɛ nhumufo na wonya ahonyade, na ɛnyɛ animdefo na wonya nnipa anim dom; efisɛ asiane to wɔn nyinaa bere a wɔnhwɛ kwan.” (Ɔsɛnkafo 9:11) Ommirikatufo bi ho betumi ayɛ hare asen afoforo, nanso ebetumi aba sɛ ɔrenni nkonim. ‘Asiane’ bi betumi ama wadi nkogu. Ebia obehintiw ahwe ase anaasɛ ɔbɛyare anaasɛ ne kotodwe behuan. Saa nneɛma yi betumi ato obiara. Ɛnyɛ bere nyinaa na efi Satan anaasɛ ɛnam bayi so na ɛba; esi kɛkɛ.
10. Dɛn na wɔka fa abayifo ho, na yɛyɛ dɛn hu sɛ eyi yɛ atoro?
10 Atoro a ɛto so abien a Satan de ba ne sɛ: Abayifo gyaw wɔn nipadua hɔ tu anadwo kohyia abayifo foforo anaa wɔkɔtwe nkurɔfo mogya anaa wɔkɔwe nnipa a wonya wɔn no nam. Afei bisa wo ho sɛ: ‘Sɛ abayifo betumi ayɛ saa a, ɛnde dɛn ankasa na efi nipadua no mu no?’ Sɛnea yɛahu no, ɔkra no ne onipa no, ɛnyɛ biribi a ebetumi afi onipa no mu. Bio nso, honhom no yɛ nkwa tumi a ɛma nipadua no nya ahoɔden a sɛ efi nipa no mu a ɛrentumi nyɛ biribiara.
Abayifo ntumi nnyaw wɔn nipadua hɔ
11. Dɛn na ɛma yegye di sɛ abayifo rentumi nnyaw wɔn nipadua hɔ, na so wugye eyi di?
11 Ɔkra no anaa honhom no rentumi mfi nipadua no mu nkɔyɛ adebɔne anaa ade papa biara. Enti, abayifo rentumi nnyaw wɔn nipadua hɔ. Nneɛma a wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ anaa wosusuw sɛ wɔayɛ no nyɛ nokware.
12. Ɔkwan bɛn so na Satan ma nnipa gye di sɛ wɔyɛ nneɛma bi a wɔnyɛe?
12 Yɛbɛyɛ dɛn atumi akyerɛkyerɛ nsɛm a wɔn a wɔde wɔn ho ahyɛ abayisɛm mu da na wɔagyae aka no mu? Satan betumi ama nnipa agye adi sɛ wɔayɛ nneɛma bi a wɔnyɛe. Satan nam anisoadehu so betumi ama wɔasusuw sɛ wɔahu biribi, wɔate biribi, anaa wɔayɛ biribi a wɔnyɛe. Wɔ saa kwan yi so no, Satan pɛ sɛ ɔdan nnipa fi Yehowa ho na wama wɔasusuw sɛ Bible no nyɛ nokware.
13. (a) So bayi papa ye? (b) Dɛn na Kyerɛwnsɛm no ka fa nkonyaayi ho?
13 Atoro a ɛto so abien ni: Bayi papa​—nkonyaayi a wosusuw sɛ ɛko tia bayi bɔne​—ye. Bible no nkyerɛ nsonsonoe biara a ɛda bayi bɔne ne bayi papa mu. Ɛkasa tia nkonyaayi nyinaa. Susuw mmara horow a Yehowa de maa Israel man a ɛfa nkonyaayi ne wɔn a wɔde wɔn ho hyem no ho hwɛ:
“Munnni asumansɛm.”​—Leviticus 19:26.
“Sɛ ɔbarima anaa ɔbea di asumansɛm anaa ɔwɔ akɔm honhom a, wonkum wɔn.”​—Leviticus 20:27.
“Ɛnsɛ sɛ obi a ɔyɛ abusude yi bi tena mo mu: Obi a . . . oyi nkonyaa, nea ɔhwehwɛ hyɛbea ho sɛnkyerɛnne anaa odi asumansɛm, nea ɔkyekyere afoforo anaa ɔkɔ abisa.”​—Deuteronomium 18:10-14.
14. Dɛn nti na Yehowa hyɛɛ mmara tiaa nkonyaayi?
14 Mmara horow yi maa emu daa hɔ pefee sɛ Onyankopɔn mpɛ sɛ ne nkurɔfo de wɔn ho hyɛ nkonyaayi mu. Yehowa de mmara yi maa ne nkurɔfo efisɛ ɔdɔ wɔn na ɔmpɛ sɛ ehu ne gyidihunu fa wɔn nnommum. Ná ɔmpɛ sɛ adaemone hyɛ wɔn so.
15. Ɔkwan bɛn so na Bible kyerɛ sɛ Yehowa wɔ tumi kɛse sen Satan?
15 Ɛwom sɛ Bible no nka nea adaemone betumi ayɛ ne nea wontumi nyɛ nyinaa de, nanso ɛkyerɛ sɛ Yehowa Nyankopɔn wɔ tumi kɛse sen Satan ne n’adaemone no koraa. Yehowa ma wotuu Satan fii soro. (Adiyisɛm 12:9) Hyɛ no nsow nso sɛ, Satan bisaa hokwan a ɔde bɛsɔ Hiob ahwɛ fii Onyankopɔn nkyɛn na odii kɔkɔbɔ a wɔde maa no sɛ mma onkum Hiob no so.​—Hiob 2:4-6.
16. Hena nkyɛn na ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ ahobammɔ?
16 Mmebusɛm 18:10 ka sɛ: “Abannennen ne Yehowa din. Emu na ɔtreneeni guan kɔ, na onya ahobammɔ.” Enti ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ ahobammɔ fi Yehowa hɔ. Onyankopɔn asomfo mfa wɔn ho nto asuman anaa nnuru so mfa nhwehwɛ ahobammɔ mfi Satan ne n’adaemone nneyɛe bɔne ho, na wonsuro asumanfo kaberɛkyere nso. Onyankopɔn asomfo gye nea Bible ka no di: “Yehowa de, n’aniwa kyini asase so baabiara sɛ ɔde n’ahoɔden bedi ama wɔn a wɔn koma di mũ wɔ ne ho.”​—2 Beresosɛm 16:9.
17. Dɛn ho awerɛhyem na Yakobo 4:7 ma yɛn, nanso dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ?
17 Wo nso sɛ wosom Yehowa a, wubetumi anya saa ahotoso yi. Yakobo 4:7 ka sɛ: “Mommrɛ mo ho ase nhyɛ Onyankopɔn ase; munsiw Ɔbonsam kwan na obeguan afi mo ho.” Sɛ wosom nokware Nyankopɔn no, na wobrɛ wo ho ase ma no a, wubetumi anya Yehowa mu ahotoso sɛ ɔbɛbɔ wo ho ban.
So Abayifo Betumi Adi Anyinam So?
Wɔ 1977 mfiase no, wɔhyew nnipa 14 a na wosusuw sɛ wɔyɛ abayifo kum wɔn wɔ baabi a ɛbɛn Pietersburg, wɔ South Africa. South Africafo nsɛmma nhoma a wɔfrɛ no Drum kae wɔ eyi ho sɛ: “Ehu aka mmarima ne mmea a wɔwɔ ɔman no mu no. Wosuro sɛ wɔde bayi bɛhaw wɔn na anyinam apae asi wɔn so . . .
“Ɛsɛ sɛ wɔyɛ ho biribi . . . Esiane eyi nti, DRUM nsɛmma nhoma no twaa asumanfo nyinaa mpoa sɛ: Yɛde R5 000 [$5,750 (U.S.) saa bere no] ato yɛn adwumayɛbea retwɛn mo sɛ, sɛ March 1977 no mo mu bi tumi ma anyinam pae kum Stanley Motjuwadi a, ɔmmɛfa. Sɛ morentumi nyɛ a, momma obiara nhu sɛ yɛ a moyɛ mo ho sɛ mubetumi adi anyinam so no yɛ nkwaseasɛm a ɛho nhia.
“Enti, mo abayifo atorofo, mumfi ase nsɔ mo bayi kuku no ase gya. Sɛ mowɔ tumi a, monyɛ mma yɛnhwɛ.”
So abayifo no tumi maa anyinam paee de dwudwoo wɔn ano? Dabi, wɔantumi. Owura Motjuwadi, Drum kyerɛwfo no anwu na mmom ɔyɛɛ yiye, na awiei koraa no ɔbɛyɛɛ nsɛmma nhoma no samufo.
Adaka: Ɔkwan bɛn so na nhoma kyerɛwfo bi a ɔwɔ South Africa kasa tiaa abayifo, na dɛn na efi mu bae?
ƆFA 1 So Ɔsom Nyinaa Kyerɛkyerɛ Nokware No?
ƆFA 2 Wobɛyɛ Dɛn Atumi Asua Nokwasɛm a Ɛfa Nyankopɔn Ho No?
ƆFA 3 Henanom Na Wɔte Ahonhom Atenae Hɔ?
ƆFA 4 Ɛhefa Na Yɛn Nananom Wɔ?
ƆFA 5 Nkonyaayi, Asumansɛm, Ne Abayisɛm Ho Nokwasɛm
ƆFA 6 Onyankopɔn Gye Ɔsom Ahorow Nyinaa Tom Anaa?
ƆFA 7 Henanom Na Wɔsom Nokware Som?
ƆFA 8 Twe Wo Ho Fi Atoro Som Ho; Fa Wo Ho Bɔ Nokware Som
ƆFA 9 Nokware Som So Betumi Aba Wo Mfaso Daa!
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan Ɔkwan a Ɛkɔ Daa Nkwa Mu No—So Woahu?
Dɛn na Bible Ka Fa Ahonhonsɛmdi Ho?